गोविन्द केसीका मागबारे एमाले स्थाई समिति बैठक, यस्तो छ निर्णय | Capital Khabar ::
गृह Breaking News गोविन्द केसीका मागबारे एमाले स्थाई समिति बैठक, यस्तो छ निर्णय
गोविन्द केसीका मागबारे एमाले स्थाई समिति बैठक, यस्तो छ निर्णय
काठमाडौं– नेकपा एमालेले अनसनरत डा. गोविन्द केसीका बारेमा सरकार र सत्तागठबन्धनले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको स्थाई समिति बैठकले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकार र सत्तागठबन्धनले द्धैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।
अघिल्लो लेखमासरकारी कागजात किर्ते गर्ने अभियुक्त जेल चलान
अर्को लेखमासर्वोच्चद्वारा चुडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश